Dare Rinorasa Mhosva Yanga Ichipomerwa Chin'ono
Dare repamusoro nhasi rarasa mhosva yanga ichipomerwa mutori wenhau, Hopewell Chin’ono, yekuburitsa mashoko emanyepo richiti mutemo wakashandiswa kusunga Chin’ono wakabviswa kare mumabhuku emitemo yenyika.
Mutongi wedare repamusoro, Justice Jester Charewa, varasa mutongo wakaitwa nedare repasi wekuti Chin’ono ane nyaya uye anofanira kutongwa.
Gweta raChin’ono, VaHarrison Nkomo, vaudza Studio 7 kuti Justice Charewa varasa mutongo wedare ramajisitiriti panyaya iyi vachiti mutemo wakashandiswa pana Chin’ono hausisiri mutemo munyika ino.
Hatina kukwanisa kutaura naChin’ono kuti tinzwe kuti ari kunzwa sei nemutongo wapihwa nedare.
Asi VaNkomo vati Chin’ono afara chose nemutongo uyu ati zvese zvakaitika zvingadai zvisina kuitika dai mapurisa nevachuchusi vakange vamuterera paaitaura kuti mutemo wavaishandisa wainge waraswa nedare repamusorosoro kare.
VaNkomo vati vachagara pasi naChin’ono kuti otora matanho apo zvichitevera mutongo waJustice Charewa.
Vatiwo vari kuda kuti Chin’ono atange apihwa mari yechibatiso yaakabvisa panyaya iyi sezvo yaraswa nedare.
Chin’ono akasungwa musi wa 8 Ndira achipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo weCriminal Law (Codification and Reform) Act mushure mekunyora padandemutande rake reTwitter kuti pane mwana mudiki ainge afa mushure mekurohwa nemapurisa.
Akagara jeri reChikurubi mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramajisitiriti uye akozipihwa mukana webhabhadhara mari yechibatiso musi wa 27 Ndira.
Chin’ono akabvisa zviuru makumi maviri zvemadhora emaRTGS semari yechibatiso zvihitevera kusungwa kwaakaitwa muna Ndira.
Asi achinyora paTwitter yake, Chin’ono ati ari kuda kusungisa hurumende nekumusunga kwayakaita, pamwe nekumuchengetedza uye nehutsinye hwayakaratidza paive muhusungwa iye asina mhosva yaakapara.
Mutauriri weMDC Alliance, Fadzayi Mahere pamwe nemuriri weZengesa West, VaJob Sikhala, vari kupomerwawo mhosva yakafanana neyanga ichipomerwa Chino’ono.
Mune imwewo nyaya, mukuru wevechidiki muMDC Alliance, Obey Sithole, avo vakasungwa nemusi Muvhuro vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinonyangadza kana kuti Criminal Nuisance amiswa pamberi pedare nhasi.
Gweta rake, VaObey Shava, vakumbira dare kuti musungwa atongwe achibva kumba asi mutongi wedare, VaRichard Mangosi, vati vaudza VaShava kuti vachapa mutongo wavo pachikumbiro ichi mangwana.
Mune imwewo nyaya mumiriri weHarare West muNational Assembly, Muzvare Joana Mamombe, nemumwe wavo Muzvare Cecilia Chimbiri, vasvitsawo chikumbiro chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso.
Aka ndekechina vaviri ava vachikumbira kuti vabviswe kuChikurubi Maximum Prison kwavakachengetedzwa.
Mutongi wedare, VaTawanda Chitapi, vaudza gweta revaviri ava, VaAlec Muchadehama, kuti vachapa mutongo wavo pachikumbiro chaMuzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri nemusi weChishanu.